TALOOYINKA: XADIISKA CUSUB HOUSEHOLD HA UU HELI KARO NOLOSHAADA - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » VIDEOS TALOOYINKA: 26 HABEEN HOUSEHOLDS LAGU HELAY LAMBARKA
TALOOYINKA: 26 HABEEN HOUSEHOLDS LAGU HELAY LAMBARKA
KA HELI KARTA CUNTADAADA
Fiidiyowkani, waxaad ka heli doontaa farsamooyin badan oo naf-badbaadin ah oo kor u qaadi doona jadwalka nadiifinta, inaad ku barato sida loo isticmaalo farshaxanka guriga, oo wax kasta oo guriga ku hagaajiya. Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli doontaa siyaabooyin la yaab leh oo aad ku isticmaashid alaabada caadiga ah sida saabuun, vodka iyo birta.
Baro siyaabaha aan la fileynin si aad u isticmaasho saabuun iyo saabuun. Isticmaal saabuun saabbuun si aad u sameyso dhejis caag ah oo muraayadaada ah. Ha iibsanin qoryaha hawada qaaliga ah ee loogu talagalay xirmooyinka, laakiin si fudud u gooyaa saabuunta saabuun, ku duub maro oo ku riix koodhadhka. Samee jejebka guriga lagu qubeysto ee saabuunta qubayska. Samee bambooyin nadiifinta: ku dar shaaha dubista, sitric acid iyo saabuunta dareeraha. Iska xajin karee isku dhafka iyo meesha ku jirta digsiga barafka. Bambooyinkan nadiifinta ahi waxay ku fiican yihiin nadaafada musqusha. Intaa waxaa dheer, saabuunku waa hufnaan wanaagsan oo loogu talagalay sunta. Baro barashada!
Ma u baahan tahay inaad xoqdo mindi? Waxaan wadaagnaa hab fudud oo loo sameeyo! Qaado saxan dhoobada ah oo ku dhaji meel hoose. Tijaabi saxan gacantaada aan gacanta ku jirin oo si tartiib ah u jiid garbaha mindhicirka geeska dhoobada. Samee gawaarida qabow ee ku yaala tuubbo rinjiga oo furan oo u muuqda hal abuur hal abuur leh. Naqshadeynta mashruucan waa mid macquul ah in qof kastaa uu u maleynayo in rinjiga la miiray oo daboolay dhulka. Qaado qoriga dabka qabow oo aad bilowdo abuurista! Isticmaal kariimka tartiibka si aad u nadiifiso taarikada calaamadaha calaamadaha.
Casriyeyaasha hawadu waxay ka kooban yihiin kiimiko badan oo waxyeelo u geysan kara caafimaadkaaga. Intaa waxa dheer, way qaali yihiin, dhadhanka caadiga ahina maahan mid aad u wanaagsan. Waxaad si sahlan u soo saari kartaa mashiinka hawada leh gacmahaaga. Dhamaan waxaad u baahan tahay vodka iyo caleemaha dhirta. Fiiri casharradayada.
00: Saabsanaha Xiddada 11 Isticmaala
01: 40 Qalabka Nadiifinta Dhaqanka
03: 57 Joojiye Isku-xidhan
08: 22 hawo qaadaha cusub leh naas iyo vodka
11h45 Ku illaali macaanaha khamriga cas
13: 32 Cunnada jikada ee madadaalada
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=5DAgtaSOusg
"Mbappé? Aniga ahaan waa quruxda ciyaaraha" - Wareysiga Fast Kad Foot ee Kadrad - VIDEO
Moustik Karismatik Bayam Sellam (Dhaqdhaqaaqa Micro) - HALKAN VIDEO